Alakamisy 09 Mey 2019. – FJKM
Alakamisy 09 Mey 2019.
Fandalinana ny Filazantsara araka an’i MARKA
Mpitsara marina tokoa i Jesoa Kristy fa tsy mitsara na mijery ny olona araka ny endrika , na fomba ivelany Izy . Mampitandrina àry Izy eto
: »Mitandrema ny amin’ny mpanora-dalàna izay mazoto mandehandeha miakanjo akanjo lava sy te-hoharabain’ny olona eny an-tsena , mandany ny tranon’ny mpitondrantena ka manao vavaka lavareny mba ho fiolahana , ireo no hahazo fahamelohana , ireo no hahazo ny fahamelohana mafimafy kokoa » (and38-40). Tsy ny fitafianao , na ny fombafombanao ivelany no zava-dehibe amin’ny Tompo . Ny toetra amam-panahinao anaty mihitsy no ijeren’ny Tompo anao.
Maneho izany indray maka indray i Jesoa eto tamin’ny nilazany tamin’ny mpianany fa : » ireo rehetra ireo dia tamin’ny haben’ny fananana ny nandatsahany tao , fa izy (mpitondrantena malahelo) kosa tamin’ny alahelony no nandatsahany tao izay rehetra nananany dia ny fivelomany rehetra » (and44) .
Mitaona antsika àry i Jesoa anio , hanavao fanolorantena , tsy ny eny ivelany na ny fijerin’ny hafa no hahatonga antsika eo amin’ny asa fanompoana sy fanolorantena fa tena ilay toe-panahy araka an’ Andriamanitra , Imanoela : Amintsika Andriamanitra mihitsy no hanosika antsika am-pitiavana sy amim-panetretena hiatrika ny fanompoana Azy .